> Resource> Video> Olee otú iji Tinye Music (Background Music) ka Video
Kọmputa ọrụ nke afọ, ọdịmma na nkà etoju pụrụ ịhụ na ọ bara uru ịmata otú tinye music / n'okirikiri ka a video. Ke ibuotikọ emi, ị ga-amụta otú ime nke a na a mma-ọgaranya video edezi ngwa: Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor) (Filmroa maka Mac (Si Wondershare Video Editor for Mac)).
Nke a ọkachamara edezi ngwá ọrụ na-eme ka ọ na o siri ike a nsogbu ịgbakwunye ọkacha mmasị gị n'okirikiri ma ọ bụ ọdịyo egwu iji videos (iwepu mbụ ụda bụkwa ekwe omume). E wezụga, ị nwere ike ewepụtụ ogologo, kpatụ ebre ọsọ, volumn, pitch, tinye ichabo na / agwụ si-eme ka ọ zuru okè n'ihi na gị video. Nnọọ na-eso n'okpuru nzọụkwụ site nzọụkwụ ndu ịgbakwunye ọdịyo ma ọ bụ music gị video na ala.
Rịba ama: N'okpuru ebe ndu ewe Windows screenshot ịkọwa otú ịgbakwunye music ka ọdịyo. Iji tinye ọdịyo na video on Mac nwekwara ọrụ otu ihe ahụ.
1 Mbubata gị mbụ videos
Pịa "Import" nhọrọ iji mara na video faịlụ site na kọmputa gị na diski ike ka onye ọrụ album. Alternatively, nanị ịdọrọ na dobe ndị a video site na kọmputa gị ka isi window. All kwukwara na obere vidiyo ga-egosipụta na-ekpe media ebi ndụ. Rịba ama na ị nwere ike itinye ka oyiyi faịlụ ma ọ dị mkpa.
2 Tinye ndabere music video
Ịdọrọ dị video faịlụ site na album ka Video usoro iheomume otu otu. Jide n'aka na ha na-ndokwa dị ka play iji na-enweghị overlapping. Mgbe ahụ ịdọrọ na dobe music faịlụ na Music usoro iheomume. Ugbu a, i nwere ike ewepụtụ ya na ịgbanwe ọnọdụ dabara maka gị video ogologo. Mgbe ị na-ịtọ ọnọdụ, ị nwere ike ezigbo oge ego na Michael window na hụchaa ya.
Edezi audio Atụmatụ: Ugboro abụọ pịa music faịlụ ka gbapụta ọdịyo edezi panel. Ebe a, ị pụrụ ime ihe audio edits dị ka ọsọ elu / akwụsịlata ọsọ, kpatụ olu, setịpụrụ ichabo na / agwụ si, akụ na pitch, wdg
Wepụ music si video: Ọ bụrụ na ị chọrọ kwukwara music dochie mbụ ọdịyo faịlụ, i kwesịrị ime ka a mata video, nri pịa ya ma họrọ "Audio ikwụpu". Mgbe ahụ gị mbụ audio track ga-akpaghị aka na-egosi na Music usoro iheomume. Iji wepu ya, dị nnọọ kụrụ "Hichapụ" na keyboard. Ugbu a, i nwere ike ịdọrọ gị lekwasịrị audio faịlụ ka kwekọrọ ekwekọ itie ke Music usoro iheomume.
3 mbupụ gị video na music faịlụ
Mgbe ị na-afọ ojuju na N'ihi ya, kụrụ "Mepụta" mbupụ gị video. Na mmapụta window na-egosi, họrọ ịzọpụta ọ bụla faịlụ Ọkpụkpọ-amasị gị.
E wezụga exporting video na kọmputa gị, ị nwekwara ike ike video maka ngwaọrụ dị ka iPhone, iPad, Zune, ozugbo bulite video ka YouTube, ma ọ bụ ọkụ na-DVD maka egwu na TV. All nwere ike nweta na nke a nile na-na-otu video nchịkọta akụkọ, ọ dịghị mmezi software chọrọ.
Ebe a bụ video ndu:
Akwado formats site Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor)
Nke a ọkachamara video edezi software akwado fọrọ nke nta ọ bụla video na ọdịyo formats. Ya mere, ị ga-ahụ ya nnọọ adaba tinye music faịlụ ka video enweghị mmezi akakabarede na àgwà àjà.
Video Formats: MOV, mpg, MPEG, MP4, WMV, AVI, FLV, MKV, M4V, DV, H264, 3GP, VOB, DIF, aku, H261, NSV, DAT, EVO, RM, RMVB, TS, DVR-MS , TP, TRP, M2TS, ASF
Audio Formats: MP3, AAC, WAV, AC3, MKA, M4V, M4A, FLAC, adaka, AIF, AIFF, adaka, CUE, AU, AMR, OGG, DPE, MPA, MP2, RA, WMA
Photo Formats: jpg, JPEG, PNG, BMP, JPE, TIFF, GIF, diblateyim, JFIF, TIF